जीवन फेरिएको प्रशिक्षणको काम- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
त्यो टिमले अहिलेसम्म विदेशी प्रशिक्षकको मुख देख्न पाएको थिएन । त्यसमाथि कोल्सलाई पाकिस्तानको मुस्लिम संस्कृतिबारे केही पनि थाहा थिएन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? कोल्स आफैंले पनि कुनै विदेशी टिमलाई प्रशिक्षण दिएका थिएनन् । लाहोर आएको भोलिपल्ट उनका अगाडि ३० महिला खेलाडी थिए, त्यसमध्ये केहीले पटक्कै अंग्रेजी बुझ्दैनथे ।
लाहोर — सिट नम्बर ५४ एफ । अकल्यान्डबाट दुबई जाने उडानमा मार्क कोल्सले पाएको सिट त्यही थियो, विमानको पछाडितिर । केहीका लागि लामो न लामो उडान साहसिक काम जस्तै हुने गर्छ । कोल्सका लागि त्यसैमा डर थियो ।
जति बेला उनी ‘चेक इन’ भए, निकै आत्तिएका थिए । काउन्टरमा रहेका महिलालाई आफ्नो नाम पनि भन्न सकेनन्, कोल्सले । विमानमा प्रवेश गरेयता उनले आफैंले आफैंलाई प्रश्न गरे, कोल्स के पो गरिरहेका छौ ?
दुबईबाट उनी लाहोर लागे, पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर । विमानस्थलबाट बाहिर निस्केयता टोयाटा हायस समाते । मध्यरातको समय थियो, तर पनि चर्को गर्मी थियो, ३५ डिग्री सेल्सियस । अँध्यारो थियो, उनलाई गाडीले उनलाई एउटा घरमा छोड्यो, जसको शीर्ष भागमा ठूलो फलामे ढोका थियो । त्यो घरको सुरक्षाकर्मीले उनलाई कोठासम्म पुर्‍याए । कोठमा एउटा खाट थियो, जोडिएको शौचालय । सँगै टीभी पनि । त्यसमा बजिरहेका ३७ च्यानलमध्ये दुई मात्र अंग्रेजी भाषामा थिए ।
खाटमा पल्टिनेबित्तिकै उनले सोचे, ‘म किन यहाँ आएँ होला, के मैले चाहेको यही हो त ? अब घर जाने दिन पनि चाँडै आउने छैन् । म त कतै नराम्रोसँग फसें कि ?’ क्रिकेट इन्स्ट्रक्टरका रूपमा उनी लहोर पुगेका थिए र उनले पाएको जिम्मेवारी निकै ठूलो थियो । उनलाई पाकिस्तानी महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षक बनाइएको थियो । सन् २०१७ को कुरा थियो, पाकिस्तानी टिम महिला विश्वकप खेलेर फर्केको थियो, जसका सबै खेलमा टिम पराजित रहेको थियो ।
त्यो टिमले अहिलेसम्म विदेशी प्रशिक्षकको मुख देख्न पाएको थिएन । त्यसमाथि कोल्सलाई पाकिस्तानको मुस्लिम संस्कृतिबारे केही पनि थाहा थिएन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? कोल्स आफैंले पनि कुनै विदेशी टिमलाई प्रशिक्षण दिएका थिएनन् । लाहोर आएको भोलिपल्ट उनका अगाडि ३० महिला खेलाडी थिए, त्यसमध्ये केहीले पटक्कै अंग्रेजी बुझ्दैनथे । गर्मीले कोल्सको चस्मा क्षणक्षणमा बाफले अवरोध गरिरहेको थियो, पसिनाले निथ्रुक्क भिजेका थिए ।
उनले खेलाडीलाई जम्मा गरेर भने, ‘हेर, यसअघि पाकिस्तानी महिला टिमले कसरी खेलेको थियो, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन । तर मैले टिमका केही खेल भने टीभीमा हेरेको छु । अब फेरि एक महिनाभित्र हामीले न्युजिल्यान्डको सामना गर्न लागेका छौं, हामीलाई त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्नेछ । मेरो सबैलाई अनुरोध छ, सक्दो राम्रो खेल्ने प्रयास गर्नु । यस्तो गर्न सक्यौं भने हामीले जिते पनि हारे पनि विजय हाम्रो नै हुनेछ ।’
लाहोरको अभ्यास मैदान कत्ति पनि राम्रो थिएन, कहाँ त्यो वेलिङटनको हरियो न हरियो मैदान, कहाँ सुक्खा यो मैदान । सानो छँदा उनी आफ्ना बुबा माइकल कोल्ससँग वेलिङटनको मैदानमा क्रिकेट हेर्ने गर्थे । सन् सत्तरीतिर क्रिकेट सौखिन खेल नै थियो, यसका कमाउने भनेको केही पनि थिएन् ।
वेलिङटन टिमका यी फास्ट बलर कोल्स अरू बेला प्लास्टिक कारखानमा काम गर्थे, अनि सप्ताहन्तमा क्रिकेट खेल्थे । अथवा खेल्ने अवसर सार्वजनिक बिदाको दिन हुन्थ्यो । कोल्सका लागि आफ्ना बुबा सबथोक थिए । उनी एक्लो सन्तान पनि थिए । उनी आफ्ना बुबा जस्तै हुन चाहन्थे । उनलाई जतिले पहिलोपल्ट देख्थे, भन्थे, ‘तिमी त माइकल कोल्सका छोरा रहेछौं ।’ उनी उत्तर दिन्थे, ‘तर म त मार्क कोल्स पो हुँ ।’ जेहोस्, आफ्नो बुबाको छायामै हुर्के बढे, उनी । उनी आफैं फास्ट बलर हुन चाहन्थे र सपना देख्थे, ब्ल्याक क्याप्सका लागि खेलेको । तर उनको खेलाडी जीवन लामो चलेन, ढाड दुख्ने समस्याका कारण खेल्न छाड्नुपरेको थियो ।
यसै कारण उनलाई रक्सी खाने बानी पर्‍यो, रक्सी खानु राम्रो थिएन, तर त्यसलाई छोएपछि उनलाई लाग्थ्यो, ढाडको दुखाइ कम भएको छ, आत्मविश्वास बढेको छ । कोल्स २० वर्षको मात्र के भएका थिए, नराम्रैसँगै रक्सी खाने भइसककेका थिए । साथीहरूसँग लगातार १५/१५ घण्टा रक्सी खान्थे । पछि त कोल्सको रक्सी खाएको बेला पनि आत्मविश्वास हुन छाड्यो, उनले चारैतिर अन्धकार मात्र देखे । यसक्रममा उनले अनेक काम गरे, जस्तो– मास्क टेप बेच्ने काम ।
एक दिन उनले क्रिकेट प्रशिक्षणको काम पाए, स्थानीय क्लबमा । त्यसपछि उनले लगातार १५ वर्ष प्रशिक्षककै रूपमा काम गरे । त्यसै क्रममा उनले अस्ट्रेलिया र भानुआटुमा महिला टिमलाई प्रशिक्षणको काम पनि गरे । अरू तथाकथित वयस्क मान्छेले जस्तै, जति बेला फुर्सद हुन्थ्यो, कोल्सको काम हुन्थ्यो, रक्सी खाने । यसले उनका केही निजी सम्बन्ध सधैंका लागि ब्रिगिन सक्ने स्थितिमा पुगेको थियो । अनि प्रशिक्षकका रूपमा पनि उनको काम राम्रो हुन सकेको थिएन । अब त उनी ४० वर्षका पनि भए, तर उनले खासै केही गर्न सकेका थिएनन् भन्दा हुन्छ । न्युजिल्यान्डका लागि खेल्ने सपना टुटेकोमा उनी अभैः मर्माहित थिए । सन् २०१७ तिर एक दिन कामको दबाबमा उनले पाँच घण्टा एउटा पबमा बिताए र सिधा घर गए । घरमा उनको प्रेमिका मेल थिइन्, अनि दुई हुर्कंदै गरेकी छोरी । उनले आफ्ना सात वर्षका छोरीलाई भने, ‘म धेरै टाढा जान लागेको छु, आमाले तिमीहरूलाई हेर्ने छिन् ।’ अनि कोठा बन्द गरेर उनले आफ्नी प्रेमिकालाई भने, ‘म मर्दै छु ।’
प्रेमिकाले उनलाई त्यस्तो केही पनि गर्न दिइनन् । बिहान जति बेला उनलाई चेत आयो, उनले आफैंले आफैंलाई सोधे, ‘तिमीले यो के पो गर्न लागेका थियौ ?’ उनी आफ्नी प्रेमीसँगको १२ वर्ष पुरानो सम्बन्ध टुटाउन चाहँदैन थिए । त्यसमाथि स्कुलमा पढ्दै गरेका उनका दुई छोरी पनि त थिए । कोल्स धेरै चिकित्सकीय परामर्शबाट गुज्रे । रक्सी खान कम गरे, राम्रा बानी बसाल्नेतिर लागे । तर उनले अब के गर्ने हो भनेर सोच्न सकेका थिएनन् ।
त्यसको चार महिनापछि उनी त्यही महिला विश्वकप घरमै हेरिरहेका थिए, न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई नराम्रोसँग हराएको थियो । सोचे, यही पाकिस्तानी टिमको प्रशिक्षक बन्न पाए ? सोधखोज गरे । एक दिन उनले फोनमा खबर पाए, पाकिस्तानी महिला टिमको प्रशिक्षक बन्ने प्रस्ताव । उनले मन मनै सोचे, क्रिकेट खेल्ने सपना टुटे पनि क्रिकेट प्रशिक्षक बन्नु पनि त खराब होइन ? त्यसमाथि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उनलाई तलब दिन सक्ने स्थितिमा थिएन । उनले ३० सदस्यीय टिम पाएको थियो, जसको उमेर १८ देखि ३३ वर्षको बीचमा थियो । सन् १९९८ मै मात्र पाकिस्तानमा महिला क्रिकेट सुरु भएको थियो । पाकिस्तानी समाज रुढिवादी थियो, त्यसैले महिलाले पनि क्रिकेट खेलेको हेर्न नसक्ने खालेको थियो । समाज सोच्थ्यो, महिलाले पनि क्रिकेट खेल्छ र ? यो त समय र पैसाको बर्बादी मात्रै हो । खासमा पाकिस्तानी समाज महिला भनेपछि हुनसम्मकै लागि अनुदार छ, पाकिस्तानमा जत्तिको लैगिक विभेद अन्यत्र कमै हुन्छ ।
टिमका एक सदस्य कति गरिब थिइन् भने उनीसँग आफू अनुकूल लगाउने जुत्ता पनि थिएन । अर्को एक खेलाडी दुई घण्टा बस चढेर प्रशिक्षणका लागि आउने गर्थिन । एक दिन उनको परिवारलाई थाहा भयो, आफ्नो छोरी त क्रिकेट पो खेल्छिन् । परिवारले उनलाई क्रिकेट खेल्नबाट रोक्न सक्दो प्रयास गर्‍यो, तर पछि आफैं हार खान बाध्य रह्यो । अनि केही खेलाडी क्रिकेट बल किन्ने आर्थिक हैसियत नभएका कारण प्लास्टिक पगालेर बनाएको बलबाट खेल्छन् ।
जेहोस्, यस्तै सदस्यले भरिएको टिमको प्रशिक्षण चल्यो, केही दिनको प्रशिक्षण पछि दुबईमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध तीन खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला पनि आइपुग्यो । त्यसको सुरुआती दुई खेलमा पाकिस्तान पराजित भए पनि तेस्रो खेल जितिहाले । त्यसपछि त कोल्सलाई पारिश्रमिक पनि दिन सुरु भयो । सन् २०१८ र २०१९ त गज्जब नै भयो, पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिजलाई हरायो भने दक्षिण अफ्रिकासँगको शृंखला बराबरीमा ल्याउन सक्यो । त्यही वर्ष उनलाई न्युजिल्यान्ड फर्कनु नै पर्‍यो, परिवारका कारण ।
पाकिस्तान र उसका महिला खेलाडीबाट उनलाई बिदाइ हुन कम्ती गाह्रो भएको थिएन । अचेल उनी विरलै रक्सी खाने गर्छन्, यसो सामाजिक हुन, बियरसम्म खान्छन् । अब त उनले मेलसँग विवाह पनि गरिसके । यिनै मेल भन्छिन्, कोल्स दुई वर्ष के पाकिस्तानमा बसे, उनी त पूरा फेरिएका छन् । खासमा उनी मात्र फेरिएका छैनन्, फेरिएको त पाकिस्तानी महिला क्रिकेट पनि छ । उनी अझै पनि पाकिस्तानी महिला क्रिकेटमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्छन् ।
उनलाई ती पाकिस्तानी महिला खेलाडीले फेरि आफ्नो देशमा आउन अनुरोध पनि गर्छन् । तर उनी चाहँदैनन् । यसैक्रममा उनले एउटा सपना भने पूरा गरेका छन्, न्युजिल्यान्डका लागि क्रिकेट खेल्न नपाए पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक त बनियो । प्रशिक्षक जीवन त अझै पनि चलिरहेको छ । यसमा उनलाई खुबै गर्व लाग्छ । उनी भन्छन्, अबको केही वर्षमा आफूले सिकाएका पाकिस्तानी महिला खेलाडी पनि बुढी हुनेछन् र भन्नेछन्, ‘हाम्रा गोरा प्रशिक्षकले हामीलाई क्रिकेट खेल्न सिकाएका थिए ।’
(न्युजिल्यान्डको स्टफ अनलाइनमा छापिएको सामग्रीको स्वतन्त्र अनुवाद)
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०९:१९
श्रावण २७, २०७७ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) केन्द्रले प्राविधिक शिक्षालाई सम्बन्धन अधिकार प्रदेश परिषद्लाई दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रको बैठकले सीटीईभीटी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०९:१६